सुबिसुको इन्टरनेट अवरुद्ध भएपछि ग्राहक आजित : RajdhaniDaily.com
राकेश गुप्ता - February 9, 2021 0
राकेश गुप्ता - February 8, 2021 0
राकेश गुप्ता - January 28, 2021 0
राकेश गुप्ता - January 26, 2021 0
Home अर्थ सुबिसुको इन्टरनेट अवरुद्ध भएपछि ग्राहक आजित
सर्लाही । इन्टरनेट प्रदायक निजी कम्पनी सुबिसुको ‘इन्टरनेट मस्त जिवन स्वस्थ्य’ नारामै सिमित हुने भएको छ । देशकै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक दावी गर्ने सुबिसु केबल नेट प्रालिको ग्राहकहरु भरपर्दो सेवा नपाएर आजित बनेका छन् ।
सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रमा सुबिसुका ग्राहकहरु इन्टरनेट सेवा भरपर्दो नभएर आजित बनेका हुन् । इन्टरनेट नचल्दा ग्राहकहरुले ग्राहक प्रतिनिधिहरु संग गुनासो गर्दा कहिले सरभर डाउन त कहिले तार चुडिएको बहाना बनाउने गरेका छन् ।
केहि दिन अघि ईश्वरपुर नगरपालिकामा तार चुडिएपछि ५ दिन सम्म सुबिसुको सेवा अवद्ध भयो । तीन दिन अघि पनि चन्द्रनगर वडा नं. १ ,३ लगायतको अन्य क्षेत्र पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा आफुहरुलाई ठुलै नोक्सानी भएको चन्द्रनगर १ बस्ने सुबिसु ग्राहक संजय महतोले बताए ।
३ दिन सम्म गुनासो गरेपछि बल्ल चौथो दिन आइतवारबाट इन्टरनेट सुचारु भएको अर्का प्रयोगकर्ता रमेश यादवले बताए । मौसममा गडबडी नहुँदा इन्टरनेटमा समस्या आइरहने सुबिसू प्रयोगकर्ता यादवले बताए ।
केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवाप्रदायक सुबिसु केबलनेट प्रालिले नयाँ वर्षको अवसरमा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेर कम्पनीले ‘इन्टरनेट मस्त, जीवन स्वस्थ’ नामक नयाँ योजना ल्याए पनि योजनाको एक महिना नबित्दै ग्रामिण भेगमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएर त्यो नारा नारामै सिमित भएको प्रयोगकर्ताको भनाई छ ।
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय अभिनेत्री अप्सरा रानी बोल्ड लुकका कारण प्रायः चर्चामा रहन्छिन्। निर्देशक रामगोपाल बर्माकी अभिनेत्रीको सोसल मिडिया अकाउन्ट बोल्ड र हट तस्बिरले...
Not-to-be-missed राकेश गुप्ता - October 9, 2020 0
प्रदेश १ राकेश गुप्ता - September 10, 2020 0
इलाम । इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका वडा नं. २ माइमझुवाबाट सात थान भरुवा बन्दुक प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रहरीले सूचनाको आधारमा जंगलको ओढारको एक स्थानबाट...
विदेश राकेश गुप्ता - May 14, 2020 0
बिचार राकेश गुप्ता - May 5, 2020 0
प्रदेश ३ राकेश गुप्ता - June 25, 2020 0
प्रदेश राकेश गुप्ता - May 13, 2020 0
राजविराज, सप्तरी । स्वास्थ्य सामाग्रिहरुको अभाव भइरहेको बेला राजविराज नगरपालिका कार्यालयलाई काठमाडौंस्थित एक गैरसरकारी संस्थाले बुधबार स्वास्थ्य सामाग्रि सहयोग गरेको छ । इम्प्याक्ट नेपाल काठमाडौंले...
Editor-Picks राकेश गुप्ता - January 14, 2021 0
बिचार राकेश गुप्ता - August 6, 2020 0
प्रदेश ३ राकेश गुप्ता - February 28, 2020 0
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । आज एक...
प्रशान्त वली - June 10, 2021
राकेश गुप्ता - March 5, 2020